Sweden oo sababtan darteed u xireyso xadka ay Denmark la wadaagto. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Sweden oo sababtan darteed u xireyso xadka ay Denmark la wadaagto.
Mikael Damberg: Wasiirka arrimaha gudaha Sweden. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Sida uu xaqiijiyay wasiirka arrimaha gudaha dalka Sweden Mikael Damberg, dowlada Sweden ayaa laga bilaabo caawa saqdii dhexe xiri doonto xuduuda ay la leedahay dalka Denmark. Kadib markii dalkaas lagu arkay kiisas nooca cusub ee xanuunka Coronavirus ah.
Wasiirka ayaa sheegay inay jirto cabsi ah in xanuunku uu usoo gudbo gudaha Sweden.Sweden ayaa shaley aheyd dalkii ugu horeeyay ee Nordica ah ee xayiraad kusoo roga duulimaadyada dalka UK oo ah meesha ugu badan ee lagu arkay nooca cusub ee xanuunka Coronaha ah.
Dowladaha Denmark, Norway, Finland, Iceland iyo Sweden ayaa hada dhamaantood xayiraad kusoo rogay diyaaradaha ka imaanayo dalka Ingiriiska
Xigasho/kilde: Sverige stenger grensa til Danmark fra midnatt.
Previous articleGo´aan: Halkan waa inuu iska diiwaangaliyo Qof walba oo Norway soo galayo.
Next articleSu’aalo ka taagan xalaalnimada tallaalka COVID-19.